Semalt: Mijanòna tsara amin'ny inona ny hackers amin'ny Site compromised WordPress
Mandre matetika ny tranonkala mikendry hackers sy spammers isika. Ny ankamaroan'ireo webmasters dia mihevitra fa raha tsy misy angona angalarina toy ny antsipirian'ny karatra amin'ny banky na banky, dia tsy mampaninona ny manisy ratsy ny tranonkala. Mampalahelo fa diso izy ireo satria ny hackers dia afaka manao zavatra maro amin'ny tranonkala WordPress.
Ireo zavatra lehibe hackers na spammers afaka atao amin'ny tranokalanao dia nofaritana etsy ambany avy amin'i Ryan Johnson, manam-pahaizana lehiben'ny Semalt .
Nolavina ny tranokalam-baovao ary nalain'izy ireo ivelan'ny aterineto:
Ny solosaina na spammers matetika dia manolo ny votoatin'ny Internet sy ny lahatsoratra miaraka aminy. Ohatra, ny sasany amin'ireo tranokalam-baovao no atahorana, ary nosoloina lahatsoratra mifandraika amin'ny fampihorohoroana ny votoatiny ara-politika. Mirehareha fotsiny ireo mpanafika fa nanafika ny tranokalanao izy ireo ary tsy afaka manao na inona na inona ianao raha tsy mahita ny zavatra nataon'izy ireo. Na iza na iza mitsidika ny tranokalanao dia hahafantatra fa efa nokasihina ny tranokalanao. Ohatra iray amin'ny tranonkala tsy fantatra ny opennet.net. Ho an'ireo hackers izay manolo ny votoatinao amin'ny fampielezan-kevitra, ny tranonkalanao dia toerana hanaovana dokambarotra maimaimpoana.
Alefaso amin'ny spam:
Manohy maniraka mailaka mailaka ho an'ireo olona marobe ireo mpampiasa ny fampiasana ny fampahalalana misy anao, toy ny anarernames na ny tenimiafina. Statistica dia manambara fa ny 54% amin'ny mailaka nalefa na noraisina dia spam..Tatitra iray hafa momba ny fanadihadiana dia manoro hevitra fa ny hackers dia manakorontana tranonkala WordPress maro ary mampiasa azy ireo handefa mailaka mailaka ho an'ny mpampiasa maro isan'andro. Amin'ny ankabeazan'ny tranga, tsy fantatry ny webmasters fa ny tranonkalan'izy ireo dia voan'ny hackers. Mety mahita ihany koa izy ireo fa mihabetsaka ny tranokala ary nanjary olana mahazatra ny tsingerin'ny mpizara. Ireo mpanafika dia mahazo tombony roa lehibe amin'ity zavatra ity: voalohany, ampiasainy ny loharanon-tseraseranao maimaim-poana. Faharoa, manimba ny lazanao an-tserasera izy ireo ary manimba ny votoatin'ny tranonkala amin'ny valin'ny fikarohana.
Fanovana natao tamim-pitaka:
Ireo hackers na spammers dia mandray anjara amin'ny hetsika ratsy ihany koa. Ireo fitaovam-pitaovana dia mahomby ho azy ireo hanesorana ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala maloto sy manimba. Ny mpampiasa dia tsy mahalala akory fa mitranga amin'izy ireo izany, ary mahazatra rehefa tsy mampiseho tsara ny dokam-barotra. Ireo mpanenjika dia manararaotra ireo rediredy ary mandefa fifamoivoizana avo lenta amin'ny tranonkalany manokana. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanatsara ny fizotry ny karoka fikarohana ao amin'ny tranokalany ary manaparitaka votoaty ratsy amin'ny aterineto.
Fahadisoan'ny mpamaky pejy:
Mampiasa ireo pejy famandrihana ireo hackers mba hamoahana ireo mpitsidika mba hanome fampahalalana tsy miankina na tsia. Matetika izy ireo no maka ny banky na ny mpivarotra ary manandrana manome antsika hanome azy ireo fampahalalana toy ny usernames sy ny tenimiafina. Nangalatra ihany koa ny antsipirian'ny karatry ny carte de crédit ireny pejy ireny. Ny hackers dia nahazo fanazavana maro momba ny tranokalan'ny WordPress malaza, ary ohatra iray amin'ny pejy phishing dia eff.org.
Ransomware dia programa ratsy izay afaka manakana ny fidirana ao amin'ny tranokalanao ary mangataka anao handoa ny vidim-panavotana raha tianao ny hiverina amin'ny laoniny. Ny hackers dia mampiasa ny ransomware ho toy ny fomba karama, ary manaparitaka tranokala sy bilaogy maro. Mba hisorohana ny famonoana ransomware, tokony hanana famerenana ny rakitrao ianao. Raha manana ny backup rakitra ianao, dia mety tsy maintsy handoa ny vidim-panavotana amin'ny hackers ianao satria tsy hamela anao hampiasa ny WordPress tranonkalanao ho an'ny tanjona ara-barotra.
Na inona na inona karazan'asa ataonao ary ny habetsahan'ny fifamoivoizan'ny tranonkala WordPress, ireo hackers na ireo mpanafika dia afaka mamantatra mora foana ny fomba fampiasana ny tranonkalanao noho ny antony manokana Source .